Kismaayo News » Degdeg: Wasiirkii 2aad oo iska casilay xukuumadda Kheyre
Degdeg: Wasiirkii 2aad oo iska casilay xukuumadda Kheyre
Kn: Wasiiradda gargaarka iyo ka-hor-tagga masiibooyinka Drs. Maryam Qaasim ayaa xaqiijisay inay iska casishay booskii ay ka haysay xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyre.
Maryam ayaa ku sababaysay is casilaadeeda mid salka ku haysa is barbaryaac badan oo xukuumadda dhexdeeda ah iyo shaqooyinka oon kala qeexnayn sidaasi darteedna ay u dulqaadan wayday.
Waxay dawladda u rajaysay wanaag, waxayna balanqaaday in sidii horayba looga bartay ay shacabka Soomaaliyeed khibraddeeda iyo aqoonteeda uga faa’iidayn doonto goob kasta iyo goor kastaba, laakiin dhinaca dawladda ay duruufuhu u saamixiwaayeen inay ku shaqayso qaabka is dhex yaaca ah.
Maryan oo xilal hore dalka uga soo qabatay ayaa lagu yaqaanaa daacadnimo iyo hawlkar, is casilaadeeduna waxay ka dhawaajinayaan dananka dhiilooyin ku aadan in si aan munaasab ahayn loo maroorsaday maaraynta gargaarkii shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ugu deeqeen dadkii ay ku habsatay masiibadii Zoobe iyo gargaarkii bini’aadamnimo ee abaarihii dalka ku dhuftay dhawr bilood ka hor.
Maryan waxay noqonaysaa wasiirkii 2aad ee xilka isaga degga arimo la xiriira inay shaqadooda u gudan waayeen farogalin dhinaca xukuumadda oo u ogolaan waayay inay si xor ah shaqadooda u gutaan. Maryan waxay sheegtay inaysan marnaba dawladda mucaarad ku noqonaynin.